If this type of traitor are still in duty, Myanmar will never be safe. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Politics, Issues » If this type of traitor are still in duty, Myanmar will never be safe.
If this type of traitor are still in duty, Myanmar will never be safe.
Posted by Shwe Phyu on Aug 4, 2012 in Politics, Issues |2comments
ထို့ပြင် ဘင်္ဂါလီများ၏ မွေးဖွားနှုန်းနှင့်ပတ်သက်၍ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းဌေးက ဘင်္ဂါလီဦးရွှေရောက်ဒူလာ မိသားစုအကြောင်းကို ဥပမာပေးပြောကြားခဲ့ပြီး ဦးရွှေရောက်ဒူလာတွင် မိန်းမလေးဦး၊ သားနှင့်သမီး ၂၈ ဦး၊ မြေးများ ၄၉ ဦး စုစုပေါင်း မိသားစုဝင် ၈၂ ဦးရှိကြောင်းနှင့် မွေးဖွားနှုန်းကိုဖော်ပြရန် ”စကားလုံးရှာလို့ မရနိုင်ကြောင်း” ပြောကြားခဲ့သည်။
Not only the Govt finding how these kalars are breeding but also they have to find out their own corrupted people like this who would not mind to breach any rules and give pemission those kalars just for his own good. http://www.narinjara.com/burmese/?p=1544
This ,one of the most corrupted people, traitor was taken back to Naypyidaw but the Govt have to make sure this kind of national traitors are not on duty for the safety of Myanmar.
မောင်ရင်တို့ က မယားလေးယောက်ဘဲသိတာကိုး မောင်ရင်တို့ မင်းတုန်းမင်း မိဖုရားအယောက်(၃၀၀)
`မောင်းမ(၂၀၀)ရှိသတဲ့၊ကလေး(၂၀၀) မြေး(၃၀၀)ရှိတာသိရဲ့လား သီပေါ့ကောဘယ်လောက်ရှိသလားသိရဲ့လား၊ မိဖုရား(၄၀)ရှိတယ်မောင်မ(၅၀)သားသမီးကတော့စဉ်းစားကြည့်တော့
ရခိုင်ဘုရင်တွေမှာကော မိဖုရား နဲ့ကိုယ်လုပ်တော်ခေါ်မယားငယ်(၅၀)လောက်ရှိတယ်၊
မိဖုရားလေးပါဘဲထားတာရခိုင်ဘုရင် စွလ်လတန်ရှား ဘုရင်တစ်ပါးဘဲရှိတယ်
၊မောင်နေ၀င်းကော မယား(၂၀)ကလေး(၅၀)မြေး(၁၅၀)ယောက်ရှိသတဲ့၊ နင်ရွှေဖြူလဲ(၆)ယောက်မြောက်တရုတ်မယားငယ်မဟုတ်လား အတူတူဘဲပေါ့ ၊နင်အမေလဲ၁၂ ယောက်မြောက်တရုတ်မယားငယ်ဘဲလေ ၊ဒီမျိုးဆက်ကဆင်းသက်လာတာအတူတူအနုနုတွေပါဘဲ။ အရူးအချင်းချင်းတစ်မူးမို့ရှုမနေပါနဲ့ မောင်ရင်တို့မှကန့် သတ်ချက်မရှိတောယူချင်သလို့ယူလို့ရနေ တာဘဲလေ
ဒီကောင်တွေမှာတော့ ကန်သတ်ချက်ရှိတယ်တဲ့၊ ဒါတောင်မယားကိုလုံးဝအညီအမျှထားနိုင်မှယူခွင့်ရတာ။ အညီအမျှမထားနိုင်ရင် တစ်ယောက်ဘဲယူရမယ်လို့ပညာတ်ချက်ရှိတယ်လေ၊ ဒါလဲမောင်ရင်တို့အပြစ်ပါဘဲ။သူတို့တွေကို ပညာသင်ခွင့်မပေးဘဲထိမ်းချုပ်ထားတာကို ပညာမဲ့တော့လုပ်ချင်တာလုပ်လိုရတာကို
သဘောပေါက် . .
kalar saline tinmg
If you want to talk about kings, your kalars kings also had several wives and servents. But no Burma or Rakhie king fuckeda9 years old gril like your head kalar mohammed. And most of Myanmar regular citizens do not have4wives like you kalars and treat women like child production machine. I am not the 6th wife ofachinese (may be your sister or your mother) but even if I were the 6th wife ofachinese, it is much better as chinese will only do the business in other countries but not terrorise the local people like you kalars.